Ku soo dhawow maktabaddeenna sharciyada ee khadka internetka.
Boggaan, waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan waxa aad sameyn karayso haddii ay dhibaato sharciyeed ku haysato. Tani waxay kaa caawin kartaa in aad iska ilaaliso in dhibaato sharciyeed ay ku qabsato. Waxay sidoo kale kuu sheegi karaysaa sida aad caawino u heleysid haddii aad u baahatid.
Si aad u aragtid ama u maqashid macluumaad ku saabsan xuquuqahaaga sharciyeed, guji mowduucyada hoos ku taxan. Waxyaabaha ku duuban ayaa daaqad kale kuugu daarmi doona markaad gujiso.
Waxyaabahan duuban waxaa loogu talogalay macluumaad guud oo keliya. Kuma siinayaan talo sharciyeed oo ku saabsan dhibaatada sharciyeed ee adiga gaarka kuu ah. Si aad u heshid talo ku saabsan dhibaatada sharciyeed, waa in aad la hadashaa qareen. Sharcigu in uu isbeddelo mar kasta awgeed, hubi bartaan badanaa si aad uga heshid macluumaadkii ugu dambeeyey.
Daawo fiidiyow ku saabsan kaalmo sharciyeed
Waxyeellada guriga gudihiisa ka dhacda
Waa maxay waxyeellada guriga gudihiisa ka dhacda?
Maxaan sameyn karayaa xaaladaha degdegta ah?
Sidee ayaan si nabdoon ugu joogi karayaa?
Waa maxay amarka ah banaanka kamar?
Ka warran haddii aan U.S sharci darro ku joogo?
Lambarrada khadka shidan ee deegaanka
Waa maxay SSI?
Ma in aan ahaado qof dakhligiisu hooseeyo ayaa waajib ah?
Ka warran haddii aan ahayn Muwaadin U.S ah?
Ka warran haddii aan U.S. imid wixii ka danbeeyey 22-kii Ogosto, 1996?
Ka warran haddii aan noqdo Muwaadin U.S.?
Ma waqti xaddidan ayey leedahay SSI?
Ka warran haddii aanan fahmi karin waraaqaha aan ka helo hay'adda Nabadsugidda Bulshada (Social Security)?
Ka warran haddii la ii diido SSI?
Ilaha Kale ee Sharciyeed ee Soomaaliga ku qoran
Caawinada Sharciga NY
Adeegyada Socdaalka iyo Dhalashada U.S.
Ilmahaaga ka Ilaali Rinjiga Balambamka (Sumaysan) (Lead Paint)
Ma buuxin kartaa xog wareysi kooban si aad gacan uga geysatid rugta ku xiran shabakada (Internet)?